टी–१० क्रिकेट लिगः सन्दीपको प्रदर्शन उत्कृष्ट, तर टिम पराजित - Everest Dainik - News from Nepal
टी–१० क्रिकेट लिगः सन्दीपको प्रदर्शन उत्कृष्ट, तर टिम पराजित
काठमाडौं । टी-१० क्रिकेट लिगमा सन्दीप लामिछाने प्रदर्शन आज पनि उत्कृष्ट रह्यो । उनले २ ओभर बलिङ गर्दै मात्र १४ रन दिए । उनले दोस्रो ओभरमा एन्टोन डेभिसको विकेट लिए । उनलाई सन्दीपले ४९ रनमा आउट गरे ।
आजको दोस्रो खेलमा केरला नाइट्स र कराँचियन्स भिडेका थिए । सन्दीपले विकेट लिए पनि टिमले भने हार्यो । उनको टिम कराँचियन्ससँग ९ विकेटले पराजित भयो । कराँचियन्सले एक विकेटको क्षतीमा ७.४ ओभरमा लक्ष्य भेटायो । टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको करेलाले निर्धारित १० ओभरमा ७ विकेटको क्षतीमा १०४ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस सन्दिपसहित ३ नेपाली खेलाडी आइसिसिको बरियतामा
सन्दीपको टिमका पार्नेलले ५९ र सोहीन तनबिर २३ रनबाहेक अन्य ब्याट्स्म्यानको प्रदर्शन फिक्का रह्यो । बलिङमा कराँचियन्स पीभी टम्बे एक्लैले ५ विकेट लिए । १०४ रनको लक्ष्यका साथ मैदान उत्रको कराँचियन्सले ९ ओभरमा लक्ष्य प्रस्तुत गर्यो । उसका लागि सेन वाट्सनले ५० र एन्टोन डेभिसले ४९ रन बनाए ।
याे पनि पढ्नुस बंगलादेश प्रिमियर लिगः सन्दीप आज टिममा पर्ने सम्भावना कति ?
साविकको विजेता समेत रहेको केरलाले पहिलो खेलमा पख्तुनलाई ८ विकेटले हराएको थियो । सो खेलमा सन्दिपले तीन विकेट लिएका थिए । पहिलो खेलमा म्यान अफ द म्याच बनेका सन्दिप आज पनि प्लेइङ सेटमा पर्ने प्रबल संभावना रहेको छ । सन्दीपले २ ओभर बलिङ गर्दै १७ रन खर्चेर ३ विकेट लिएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस क्यानेडियन लिगमा सन्दिपको शानदार प्रदर्शन, लगातार तीन विकेट !
सन्दीपले डेब्यु खेलको आफ्नो पहिलो ओभरमै दुई विकेट लिएका थिए । यस्तै उनले दोस्रो ओभरमा समेत एक विकेट लिएका थिए । यता, कराँचीयन्स पहिलो जितको खोजीमा रहेको छ । पहिलो खेलमा कराँचियन्स राजपुत्सँग १० विकेटले पराजित भएको थियो ।
ट्याग्स: sandeep lamichhane, T-10